Bacda cad ee Shiinaha ee warshadda yar yar ee Flat iyo soosaarayaasha | Hong Bang
Bacda Warqada Cad ee guntinta hoose ee Flat
Boorsada Kraft Paper ee loogu talagalay baakadaha Kafee iyo Shaaha
Custom daabacay caaga Rolls caaga Daabacaadda for Auto ...
Custom daabacay caaga Poly Film Roll
Boorsada hoose ee Flat Waraaq
Sagaarka Flat & Bacda Istaag
Maaddaama ay dadku aad iyo aad ugu sii fiirsanayaan ilaalinta deegaanka, qalabka wax lagu duubo ee loo yaqaan 'Eco friendly' ayaa la soo saaraa. Baakadaha wax baabi'in kara badanaa waxay ku tiirsan yihiin baakadaha ka samaysan alaabada sida waraaqaha, poly lactic acid, iyo qalabka bio-ku-saleysan ee ay ku baabi'i karaan noolaha dabiiciga ah. Badanaa, boorsada istaagga ayaa inta badan loo isticmaalaa cunnada fudud, shaaha ama baakadaha qaxwada.
Bacda Warqadda Cad ee leh daaqada
Waxyaabaha: Waraaqda Cagaarka ah ee loo yaqaan 'Brown Kraft Paper', White Kraft Paper, Duplex Board, Specialty Paper, or Custom Paper
Midabka: CMYK / Pantone Color
Cabir: Lagu habeeyay iyadoo ku saleysan codsiyadaada
Dhumucdiisuna: 50; 80 gsm
Habka Daabacaadda: Daabacaadda Daabacaadda / Daabacaadda Gawaarida
The Kraft paper side gusseted and Stand Up Pouch waxaa laga soo saaray dhowr lakab oo ah walxo carqalad ah oo loo kala saari karo 3 kooxood oo waaweyn, kuwaas oo isu yimaada si ay u siiyaan boorsada astaamo adkaysi iyo cilad-u adkaysi u leh. Saddexdaan kooxood waa:
Lakabka Dibadda: Waxay u oggolaaneysaa daabacaadda garaafka inay dhacdo, oo xambaarsan xayeysiin u gudbinaysa farriin nooc ah oo rafcaan u leh macaamiisha.
Lakabka Dhexe: Waxay u dhaqantaa sidii caqabad difaac ah si loo hubiyo in waxa ku jira kiishka uu ahaado mid aamin ah oo cusub.
Lakabka Gudaha: Lakabka ugu muhiimsan saddexda. Lakabkaan badanaa FDA waa la oggol yahay si loo hubiyo in cunnadu nabdoon tahay markay taabato xirmada. Sidoo kale waa kuleyl-ku-xirnaan si loo xaqiijiyo macaamiisha in kiishka aan la fara-gelin.
Waraaqda 'Kraft Paper Stand Up Pouch' ayaa sidoo kale u oggolaaneysa astaamaha la beddeli karo sida jiinyeerrada, godadka sare, jeexjeexa jeexjeexa iyo daaqadda si kor loogu qaado waxqabadkeeda
Badbaadada iyo tayada sare
wuxuu noqon doonaa mabda 'koowaad. Dhamaan badeecadeena waxaa lagu sameeyaa maadada darajada cuntada taasoo micnaheedu yahay filimka aan isticmaalno, khadka iyo khadka soo saarida ayaa 100% u ah amaan qofkasta oo qaan gaar ah xitaa cunug. Dheeraad ah, waxaan ku adkeyneynaa tayada taas oo macnaheedu yahay dulqaad la'aan nooc kasta oo tanaasul ah oo muujinaya dhismo xoog leh, ciriiri hawo iyo daabacaad cad. Baakadaha adag iyo kaamil ah ee baahida macaamilka had iyo jeer waxay noqon doonaan ujeedkeenna.
Naqshadeyn iyo La habeeyay
Waa tan HONGBANG Baakadaha. Waxaan ku siineynaa xalal kala duwan bacaha baakadaha cuntada ee baahiyaha iyo codsiyada kala duwan. Noo sheeg shuruudahaaga waxaan buuxin doonaa dhammaan baahiyahaaga. Ma horumarinayno alaabada oo waxaan isku dayeynaa inaanu kuu kaxeyno dhankooda; Waxaan dhegeysaneynaa baahiyahaaga iyo injineernimada hal-abuurka ah ee xallin doona caqabadahaaga baakadaha.
ADEEGYADA IYO DAMMAANKA
Waxaan haynaa koox xirfadlayaal ah oo adeegga macaamiisha ah si aan uga jawaabno uguna xallino su'aasha 24 saacadood gudahood. Kiis kasta wuxuu lahaan doonaa qof gaar ah si loo hubiyo in nashqadda, tirada, tayada iyo taariikhda la bixinayo ay la jaan qaadayaan shuruudaha. Waxaan jecel nahay in aan bixinno adeegga ugu fiican isla markaana aan taageerada ugu badan siinno macmiilkeenna.
Hore: Boorsada Kraft Paper ee loogu talagalay baakadaha Kafee iyo Shaaha
Dambiisha waraaqaha khaaska ah ee Kraft
Bacda Hoosta Flat
Boorsada Kraft Paper
Bacda Waraaqda Kraft Oo Daaqad Leh
Boorsooyinka Waraaqda Kraft
Bacda Xaashida Bariiska Side Gusset